Imfazwe yaseNassau e-American Revolution
Imfazwe yaseNassau - Imfazwe kunye nexesha:
Imfazwe yaseNassau yayilwa ngo-Matshi 3-4, ngo-1776, ngexesha le- American Revolution (1775-1783).
AmaQumrhu kunye nabaPhathi
UCaptain Samuel Nicholas
IRhuluneli uMontfort Browne
Imfazwe yaseNassau - Imvelaphi:
Ngokuqala kweMelika yokuVikela ngo-Ephreli 1775, iRhuluneli yaseVirginia, iNkosi uDunmore, yalela ukuba ukuhanjiswa kweengalo kunye nokugqithisa isibhamu kuNassau, eBahamas, kungabikho kuthathwa yi-colonial force.
Efunyenwe yiRhuluneli Montfort Browne, le mibhalo yagcinwa eNassau phantsi kokhuselo lwamachweba, i-Montts ne-Nassau. Nangona ezi zikhuselo, uGeneral Thomas Gage , olawula amabutho aseBrithani eBoston, waxwayisa u-Browne ukuba ukuhlaselwa kweMerika kuya kwenzeka. Ngo-Oktobha 1775, i-Second Continental Congress yakha i-Continental Navy kwaye yaqala ukuthenga iinqanawa zorhwebo kwaye yaguqula ukuba isebenzise njengeenqwelo zemfazwe. Inyanga elandelayo yabona ukudalwa kwei-Continental Marines phantsi kolawulo lukaCaptain Samuel Nicholas. Njengoko uNicholas wayesebenzela amadoda emanzini, uKomodore Esek Hopkins waqala ukudibanisa i-squadron eFiladelphia. Oku kwakuquka u- Alfred (30 izibhamu), uColumbus (28), u- Andrew Doria (14), uCabot (14), uMbonelelo (12), kunye neFly (6).
Imfazwe yaseNassau - iHopkins Uhambo:
Emva kokuthatha umyalelo ngoDisemba, uHopkins wathola iilawulwa kwiKomishoni yeConference Marine eyayiyalela ukuba acacise amabutho aseBrithani amabutho ase-Chesapeake Bay naseNorth Carolina.
Ukongeza, bamnika ilungelo lokuphinda asebenze "olunokuba luncedo kakhulu kwiMelika" kwaye "uxinzelele kwiNtshaba ngokusemandleni akho." Ujoyina uHolkins e-flagship yakhe, u- Alfred , uNicholas kunye nabanye abadlali waqala ukuhamba eMlambo waseDelaware ngoJanuwari 4, 1776.
Ukulwa neqhwa elinzima, iinqanawa zaseMelika zazihlala kufuphi neSiqithi saseRededy kwiiveki ezintandathu ngaphambi kokuba zifike eKapa Henlopen ngoFebruwari 14. Kulapho, uHolkins wajoyina i- Hornet (10) kunye no- Wasp (14) owafika evela eBaltimore. Ngaphambi kokuhamba ngomkhumbi, uHopkins wakhethwa ukuba athathe inzuzo kwimimiselo yokuqonda yakhe kwaye waqala ukucwangcisa isiteleka esichasene noNassau. Wayeyazi ukuba isiqithi esikhulu semimandla esesiqithi kwaye ezi zinto zifunwa kakubi nguMbutho kaGeorge George Washington owawujikeleza iBoston .
Ukusuka eKapa Henlopen ngoFebruwari 17, uHopkins watshela iinkokheli zakhe ukuba baphenduke kwiSiqithi sase-Great Abaco kwiBahamas kufuneka i-squadron ihlukane. Kwiintsuku ezimbini kamva, i-squadron yadibana nezilwandle ezinobungozi eVirginia Capes ezikhokelela ekuhambaneni phakathi kweCompet and Fly . Nangona bobabini babuyela echwebeni ukulungiswa, lo mva waphumelela ukubuyela eHolkins ngo-Matshi 11. Ekupheleni kukaFebruwari, u-Browne wafumana ingqiqo yokuba amandla aseMerika akha i-Delaware wonxweme. Nangona ekwazi ukuhlaselwa, unokunyula ukuba angathathi nantoni na njengoko wayekholelwa ukuba iinqaba ezikulo zikwazi ukukhusela i-Nassau. Le nto yayingenangqiqo njengoko izindonga zaseFort Nassau zabuthathaka kakhulu ukuxhasa ukuqhuma kwezibhamu.
Ngelixa i-Fort Nassau yayisecaleni kweso sixeko, i-Fort Montagu esandul 'ukugqithisa isango lasempuma lihamba kwaye iphakame izibhamu ezilishumi elinesixhenxe. Zombini iinqaba zazingekho kakuhle ngokumalunga nokuhlaselwa kwe-amphibious.
Imfazwe yaseNassau - AmaMerika Umhlaba:
Ukufikelela kwi-Hole-In-The-Wall ngasekupheleni kwezantsi kweSiqithi sase-Great Abaco ngo-Matshi 1, 1776, iHopkins ngokukhawuleza yathatha amabini amancinane aseBrithani. Ukuxhaswa kwezi zinto, i-squadron yafudukela kuNassau ngosuku olulandelayo. Ngenxa yokuhlaselwa, iNicholas '200 yeMarines kunye nabalwandle abangama-50 badluliselwa ku- Providence kunye neentlobo ezimbini ezibanjwe. I-Hopkins yenzelwe ukuba iinqanawa ezintathu zingene echwebeni ekuseni-Matshi 3. Imikhosi yayiza kubakho ngokukhawuleza kwaye ikhusele idolophu. Ukusondela kwi-harbor ekukhanyeni kokusa, i- Providence kunye nabaxhasi bayo babonwa ngabakhuseli abavutha umlilo.
Ngenxa yento eyamangalisa ilahlekile, iinqwelo ezintathu zahlutha uhlaselo lwaza lwabuyela e-Hopkins squadron kufuphi neHanover Sound. U-Ashore, u-Browne waqala ukwenza izicwangciso zokususa isibhamu esikhulu se siqithi usebenzisa iinqanawa kwiichweba kunye nokuthumela amadoda angamashumi amathathu ukuqinisa i-Fort Montagu.
Intlanganiso, iHopkins kunye noNicholas yaqalisa ngokukhawuleza isicwangciso esitsha esabiza ukuhlaliswa komhlaba kwindawo esempuma yesiqithi. Efihliweyo nge- Wasp , ukuthungwa komhlaba kwaqala malunga nobusuku njengoko amadoda kaNicholas afika ecaleni kwe-Fort Montagu. Njengoko uNicholas wadibanisa amadoda akhe, ummeli waseBrithani waseFort Montagu wasondela phantsi kweflegi yesiqhumane. Xa ebuzwa ngenjongo yakhe, umlawuli waseMerika waphendula ukuba bafuna ukuthatha imimandla ye siqithi. Le ngcaciso ihanjiswe ku-Browne owayefikile enqabeni eneenkxaso. Okubi kakhulu, irhuluneli yanquma ukurhoxisa ubuninzi beenkampu zeenqaba ebuyela eNassau. Ukunyamezela phambili, uNicholas wathatha inqaba emva koko emini, kodwa ukhethwa ukuba angayiqhuba idolophu.
Imfazwe yaseNassau - Ukuthathwa kweNassau:
Njengoko uNicholas wayebambe isikhundla sakhe eFort Montagu, uHopkins wakhupha isimemezelo kubahlali besiqithi esithi, "KuGentlemen, Freemen, kunye nabahlali beSiqithi soNcedo olutsha: Izizathu zokuhamba kwam ixhoba elikulo siqithi kukuba ukuthatha i-powder kunye neentsimbi ezinjengemfazwe yeConcer, kwaye ukuba andiyikuchasene nokubeka i-design yami ekusebenziseni abantu kunye nepropati yabemi baya kukhuseleka, kwaye abayi kuhlupheka xa bengenakuphikisa "Nangona le nto yayinempembelelo ekuthintela ukuphazamiseka komphakathi kunye nemisebenzi yakhe, ukungaphumeleli ukuqhuba idolophu ngo-Matshi 3 kwavumela i-Browne ukuba iqalise inqwaba yezibhamu kwiinqanawa ezimbini.
Laba bahamba ngomkhombe ngoSt. Augustine nge-2: 00 ngoMatshi ngo-Matshi 4 baza bavala i-harbor ngaphandle kwemiba njengoko uHopkins ehlulekile ukuthumela nayiphi na iinqanawa zakhe emlonyeni.
Ngentsasa elandelayo, uNicholas waphuma kwiNassau waza wadibana neenkokheli zedolophu ezazinikela izitshixo zayo. Ukusondela kwi-Fort Nassau, amaMerika awathatha kwaye athatha i-Browne ngaphandle kokulwa. Ekukhuseleni idolophu, iHopkins yathatha inqanawa engamashumi asibhozo anesibhozo kunye nezidumbu ezilishumi elinesihlanu kunye nezinye izinto ezifunekayo kakhulu. Ukuhlala esi siqithi iiveki ezimbini, amaMerika aqala ukuphanga ngaphambi kokuhamba ngo-Matshi 17. Ehamba ngasentla, i-Hopkins ehlose ukwenza ichweba eNewport, RI. Isiqithi saseBlock Island, i-squadron yathatha i- Hawk- schooner ngo-Ephreli 4 kunye no-brig Bolton ngosuku olulandelayo. Ukusuka kwamabanjwa, uHopkins wafunda ukuba ibutho elikhulu laseBrithani lalisebenza eNewport. Ngale ndaba, wakhetha ukuhamba ngeenqanawa ngenjongo yokufikelela eNew London, CT.
Imfazwe yaseNassau - Isenzo se-Epreli 6:
Ngethuba lokuqala kwee-Ephreli, uKaputeni uTyringham Howe waseHMS uGlasgow (20) wabona i-American squadron. Ukugqiba ekukhankeni kwabo ukuba iinqanawa zababarhwebi, wavala ngenjongo yokuthatha amanani amaninzi. Ukusondela eKabot , iGlasgow ngokukhawuleza yaba ngumlilo. Iiyure eziliqela ezilandelayo zabona abaphathi be-Hopkins abangenamava kunye nabaqeqeshi behluleka ukunqoba umkhombe waseBrithani owawubhubhayo. Ngaphambi kokuba iGlasgow iphunyuke, uHowe waphumelela ukukhubaza uAlfred noCatot . Ukwenza ukulungiswa okuyimfuneko, iHopkins kunye neenqanawa zakhe zaxhamla eNew London ezimbini iintsuku emva koko.
Imfazwe yaseNassau - Imva:
Ukulwa ngo-Ephreli 6 yabona abantu baseMelika bexhatshazwa aba-10 kunye no-13 balimala ngokumelene ne-1 abafileyo kunye nabathathu abalimele e- Glasgow . Njengoko iindaba zeendwendwe zisasazeka, uHopkins namadoda akhe baqale bhiyozelwa kwaye badunyiswa ngemizamo yabo. Le nto yaba yimfutshane nje ngokuba izikhalazo malunga nokungaphumeleli ukubamba iGlasgow kunye nokuziphatha kwamanye amagosa ase squadron akhula. I-Hopkins nayo iphantsi komlilo ngenxa yokungaphumeleli ukuthobela imiyalelo yakhe yokutshatyalaliswa kwamagquma aseVirginia naseNorth Carolina kunye nokuhlula kwakhe kokuphanga. Emva kwecandelo lamacandelo ezombusazwe, uHopkins wakhululwa ngumyalelo wakhe ekuqaleni kwe-1778. Nangona ukuwa, ukuhlaselwa kwanikezela izinto ezifunekayo kwi-Army Continental kunye nokunika amagosa amancinci, afana noJohn Paul Jones . Egcinwe entolongweni, u-Browne watshintshaniswa noBrigadier General William Alexander, iNkosi Stirling eyayithathwe yiBritish kwi- Battle of Long Island . Nangona egxekwa ngokusingatha kwakhe ukuhlaselwa ku-Nassau, u-Browne kamva wakha iRoyment ye-Loyalist ye-Loyalist ye-Wales 'yaseMelika waza wabona inkonzo kwiViyo yeSiqithi saseRhode .
Imfazwe yeNguqulelo yaseNassau Yayingumsebenzi wokuqala wokuSebenzisana okuDityanisiweyo oManyeneyo waseMerika
Imfazwe yeNguqulelo: iMfazwe yaseNassau
Ukuhlaselwa kwiSiqithi esitsha se-Providence
Imfazwe yaseRhode Island - i-American Revolution
Ukuguqulwa kweMelika: uBrigadier General George Rogers Clark
Ukuguqulwa kweMelika: Uninzi uPatrick Ferguson
Ukuguqulwa kweMelika: uBrigadier General Francis Marion - I-Foam Fox
Impinduko yaseMelika: Jikelele uSir William Howe
Imfazwe Yehlabathi II: Grumman F8F Bearcat
Awuyikudlwengula Ulwaphulo-mthetho kodwa uNgxowamlwengulo, Ingxenye I-Indaba kaRenee DeVesty
Ileta Evulekileyo Kwabesetyhini abangamaKristu
Yonke into ofuna ukuyifumana ngokuPenda kweNdlu yakho
I-Laoban - Daily Mandarin Lesson
Konke malunga neMakalu: 5 kwiNtaba ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi
Yintoni yokugqoka ukuKhwela kweMihlaba yeSizwe